पत्रकारिता, सृजनशिलता र नब विकल्प
(बेनी, म्याग्दीबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका नब विकल्पले
गौरबमय १०० औं अंक प्रकाशन गर्न सफल भएको उपलक्ष्यमा लेखिएको लेख )
युवाहरुको समूह कार्यमा विश्वास गर्ने मान्छे म, जब केहि युवाहरुको समूहले बेनीमा पत्रकारिताको नयाँ आयाम शुरु गर्ने उत्साहका साथ नव बिकल्पको प्रकाशन गर्न थाले, मेरा मनमा अनेकन जिज्ञासाहरु आएका थिए । पत्रिका प्रकाशनका शुरुका हप्ताहरुमा पत्रकारितामै लागेका बेनीका केहि हस्तिहरुले भन्न थाले— रहर हो केटाहरुको दुईचार दिनको । रहर पुगे पछि थाक्छन् यिनीहरु । शुरुमा त मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । ओंठ निचार्दा दुध झर्ने अल्लारेहरु नै छन् पत्रिकामा, के यसको निरन्तरता सम्भव होला र ?
म त अनुभवमा होईन काममा विश्वास गर्ने मान्छे । मलाई त सधैं लाग्दछ, सृजनशीलता भएका मान्छेहरुका लागि अनुभव ठूलो हुनै सक्दैन । कार्यसम्पादनका समयमा आर्जन गर्ने सीप हो — अनुभव त । सृजनशिलता र लगनशीलता नभएकाहरु कुन क्षेत्रमा कति नै टिक्छन् र ? विकल्पको शुभारम्भ अंक नै आकर्षक थियो । मलाई याद छ, ठूलो मेहनतका बाबजुद प्रकाशित भएको हुनु पर्दछ, त्यो । समाचार लेखन शैली नौला थिए, ग्राफिक्स डिजाईन, फोटो छनौट, रंग समायोजन र पृष्ठ डिजाइनिङ पनि कम थिएनन् । म आत्तिएँ, लौं यो साँघुरो नगरीमा ई सबैका सकारात्मक विश्लेषणहरु सम्भव होलान ? आदि, ईत्यादि ! पत्रिका निक्लेकोमा भन्दा राम्रो निक्लेकोमा पत्रकारिता गर्नेहरुले नै आलोचनात्मक दृष्टिकोणले चर्चा गर्न थाले । त्यो कुनै हालतमा शोभनिय विषय थिएन । तर त्यसले विकल्पलाई अझ बढी परिष्कृत, परिपक्व र उत्कृष्ट बन्नमा भने प्रेरित गरेको हुनु पर्दछ ।
बेनीमा निक्लेका र निक्लिीरहेका पत्रिकाहरुले बेनी मै घट्ने घटनाहरुलाई ब्यानर न्यूज बनाउने चेष्टा गरेनन र सायद गर्ने पनि छैनन् । सम्झनामा अझै ताजा छ, म्याग्दीको एक क्रियाशिल साहित्यिक संगठन पौलस्त्य साहित्य समाजको अधिवेशनलाई ब्यानर न्यूज बनायो विकल्पले । मलाई लाग्यो, के गरिरहेछन् यिनीहरु ? पछि बुझ्दा लाग्यो, स्थानीय संघ संस्थाहरुको क्रियाकलापलाई कभर गर्नु र तीनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु विकल्पको उद्देश्य पो रहेछ ! अब यहिँ नेर लाग्यो मलाई, अनुभव ठूलो कुरो होईन । सृजनशीलता महत्वपूर्ण हो । साना मसिना घटनाहरुको पनि प्रभाव विश्लेषण गरेर घटना सम्बन्धित विषय, उपविषयहरुको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ भन्ने धेरै पत्रकारहरुले मेसो पाउँदैनन । जसले त्यो बुझ्छ, सहि रुपमा त्यहि नै सच्चा पत्रकार हो । तर कुनै पनि दल विशेष वा व्यक्ति विशेषको प्रभावमा रहेर उनीहरुकै लगौटीं बनेर आफ्ना अति नीजि अंगहरुको लाज बचाउन किमार्थ सकिदैन । विकल्पसँग सम्बन्धित युवा पत्रकारहरु यसमा चुकेँ कि चुकेँनन, त्यसको समिक्षा आवश्यक छ । नत्र बेनीमा जति पनि पत्रिकाहरु निक्ले धेरै हदसम्म राजनैतिक दलका मुखपत्रका रुपमै काम गरेँ । अझ कति त पत्रकारिताको धर्मलाई नै भुसुक्कै बिर्सिएर खुल्ला र छाडा दोहोरी, तेहेरीमा समेत उत्रे ! यो बेनीको पत्रकारिताको ईतिहासमा दुःख लाग्दो विषय हो । मलाई लाग्दैन कसैको निजात्मक गोप्यताको हुर्मत लिनु पत्रकारिताको विषय हो । वा चरित्र हत्या पत्रकारिताको विषय हो । म सधैं विश्वस्त छु, पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुनै पनि घटनाको सभ्य र भव्य तबरबाट विश्लेषण गरिनु हो ।
आठ दशहजारको एउटा क्यामेरा, सानो झोला भित्र एउटा डायरी र कलम राखेर भिर्दैमा सबैजना पत्रकार हुनै सक्दैनन् । ईः देखावटी कुरा हुन । यो दुईचार हजार आम्दानी भएको जोसुकैले गर्न सक्दछ । पत्रकार बन्नका लागि अन्तरनिहित क्षमता आवश्यक हुन्छ । यसको आफ्नै निजात्मक शैली हुन्छन । हरेक विषय माथि आफ्नै स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी हुन्छ । अनि पो पत्रकार ! तर के छन् त सबै आफ्नै खाले विशिष्ट क्षमता भएका पत्रकारहरु, बेनीमा ? होलान् तर न्यून त्यो पनि अञ्चलमै । मैले एकदिन पढेको थिएँ, बागलुङबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकामा गौश्वारामा चिया खेतीको बारे रिपोर्टिङ । जहाँ सम्बाददाता लेखेका छन्, म्याग्दी जिल्लाको गौश्वारा गा. वि. स. ! मलाई त लाग्दैन, म्याग्दी जिल्लामा गौश्वारा नामको कुनै गा.वि.स छ । त्यो त ज्यामु्रककोट गा.वि.स. एक बस्तीको नाम जस्तो लाग्दछ । अब जो पनि भन्न सक्तछ, एउटा गा.वि.स. को नाम थाहा पाउन नसकेका पत्रकारले स्थलगत रिर्पोटिङ भनेर दावा गरेको समाचारमा कति विश्वसनीयता रहन सक्ला ? बेनीमा बसेर गुर्जाका समाचारहरु धेरै आएका छन् । तर विकल्पले कम्तिमा पनि यो संस्कारलाई तोडिदिएको छ । स्थानीय पत्रिकामा छापिने समाचारको सम्भवत ः पहिलो प्रयास हुनु पर्दछ, विकल्पको यो कदम । देख्नु र सुन्नुमा आकाश—जमिनको भिन्नता हुन्छ, भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्नु हरेक पत्रकारको कर्तव्य हो । अझ हाँसो उठ्दो कुरो, बेनीमा एकजनाको नाममा छापिएको एउटा समाचार, अर्कोको नाममा पोखरामा त्यहि समाचार छापिएको हुन्छ, अरु त अरु राष्ट्रिय दैनिकमा पनि तिनै दुरुस्तै समाचार झन अर्काको नाममा धेरै पढेको छु, मैले । वास्तवमै पृथक छ, बेनी नगरीको पत्रकारीता !
पत्रकारिताका क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक अभ्यासहरुलाई चिरेर नब विकल्पका पत्रकारबन्धुहरुले बेनीको पत्रकारितालाई उठाएर म्याग्दीको पत्रकारिता मूल धार बनाउने सामथ्र्य राख्नेमा मलाई शंका छैन । मलाई विश्वास छ, नब बिकल्प छापा पत्रकारितामा धौलागिरिकै कोशेढुंगा बन्नेछ, एकदिन । मेरा झैं थुप्रै पाठकहरुको ई र यस्तै अझ अरु अपेक्षाहरु होलान विकल्पप्रति । आशा छ, विकल्प त्यो पूरा गर्न सधैं तत्पर रहनेछ र यसलाई आफ्नो धर्म पनि ठान्नेछ ।
(लेखक, २०६५ मा स्नातक तहमा पत्रकारितामा म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सर्वोत्कृष्ट छात्र हुन ।)
भगवान चोखाल said…
असाध्यै राम्रो छ हो ब्रो गूड् जब..!!!!!!& सफलताको शुभकामना....!!!!!!!!!
निराजनजी हजुरको लेख
सान्दर्भिक छ ।हो यथार्थमा
पत्रकारिताको अर्थ नै सत्य तथ्य समाचार
सम्प्रेसण गर्नु हो ।विकल्पलाई मेरो
पनी शुभकामना ।
निराजन जि, तपाईको artical तारिफ योग्य छ। राम्रो लाग्यो
रामचन्द्र थापा said…